Ipeyinti ebandayo yokutshiza umatshini wokumakisha kwendlela | KwiChina Ipeyinti ebandayo yokutshiza umatshini wokumakisha kwendlela kunye nabaxhasi
—— Ipeyinti ebandayo yokutshiza umatshini wokumakisha ezindleleni ——
I-LXD-9L Isandla sokuTsala uxinzelelo oluphezulu kumatshini wokuMakisha weNdlela engenamoya
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wezandla ezityhala uxinzelelo oluphezulu lokungenisa umoya oomatshini bokupeyinta ababandayo. I-LXD-9L yeyona ikhawulezayo phakathi koomatshini bokumakisha kwepeyinti ebandayo, isantya sayo sokusebenza sinokufikelela kwi-13kh / h,
I-LXD-6L Isandla sokuTsala uxinzelelo oluphezulu kumatshini wokuMakisha weNdlela engenamoya
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wezandla ezityhala uxinzelelo oluphezulu lokungenisa umoya oomatshini bokupeyinta ababandayo. Isixhobo esikhethekileyo kulwakhiwo lwepeyinti lobushushu obuqhelekileyo. Ifanele iindlela, uhola wendlela, indawo yokupaka, isikhululo seenqwelomoya, isikhululo. Ingaphawula umgca othe tye, umgca ophawulwe ngamachaphaza, ijika, ukuwela kweqwarha, iintolo, njl.
LXD-2L Electric Cold Ipeyinti Road yokumakisha Machine
Singumenzi omkhulu wobuchwephesha wase China kunye nomzi mveliso wombane wokumakisha wendlela yombane obandayo. Ingasebenza iiyure ezi-4 kwityala elinye elipheleleyo, kulula ukusebenza nokugcina. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezininzi, ezinjengebala lebhola, isikolo, uluntu, indawo yokupaka, umzi-mveliso, Izikolo zokuqhuba, isikhululo segesi, njl.
I-LXD-18L yoXinzelelo loMatshini oMandla oPhezulu oPhefumlayo oCoca uMatshini wokuMakisha
Singumenzi omkhulu wobuchwephesha wase China kunye nomzi-mveliso woxinzelelo oluphezulu olungena moya obandayo wokupeyinta oomatshini bokumakisha. Sisixhobo esikhethekileyo kulwakhiwo lwepeyinti lobushushu obuqhelekileyo. Ilungele iindlela, uhola wendlela, indawo yokupaka, isikhululo seenqwelomoya, isikhululo.it inokumakisha umgca othe ngqo, umgca wamachaphaza, ijika, ukuwela kweqwarha, iintolo, njl.
LXD 18L-2 Iinkuphelostencils Kwisakhelo Esiphindwe kabini Isilinda Impompo Cold Ingqele Paint Endleleni Machine
Singumenzi omkhulu wobuchwephesha wase China kunye nomzi mveliso welori onyusiweyo oyilinda kabini impompo ebandayo ipeyinti ebandayo oomatshini bokumakisha. Yenzelwe indlela enkulu, ngakumbi isebenza kwindlela yedolophu, kwisikhululo seenqwelomoya kunye nendlela yokubonisa njl njl inokumakisha umgca, umgca ophawulwe ngamacwecwe, umgca omthubi ophindwe kabini njl njl. eyongezelelweyo umpu wokutshiza ngesandla, ukuyenza iphawule imigca ngombala owahlukileyo ngaxeshanye.
I-LXD-D168 yokuqhuba Uhlobo lokuPhala kweCold Paint Machine
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wokuqhuba oomatshini bokumakisha kwipeyinti ebandayo. Isixhobo seglasi seglasi: Ukuhanjiswa kwomoya (ukusebenza koxinzelelo oluhlengahlengiswayo). I-hydraulic agitator: itanki nganye yepeyinti exhotyiswe nge-Hydraulic agitator.